ခင်မောင်ဝင်း (အသည်းရောဂါအထူးကု) - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၉၄၉၊ ဇန်နဝါရီ ၁၁
MBBS, M.Med.Sc. (Int. Med.), MRCP (UK), FRCP (Edin)
ဒေါက်တာ ခင်မောင်ဝင်း (၁၉၄၉- ) သည် မြန်မာနိုင်ငံသား ဆရာဝန် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး အသည်းရောဂါကု ပညာဌာနတွင် ပါမောက္ခ ဌာနမှူး တစ်ဦး အဖြစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ် အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်အပြင်၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး နယ်ပယ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာပေး စာများ ရေးသားသည့် အသည်း အထူးကု ပါမောက္ ဆရာကြီးဖြစ်သည်။
၂.၂ တာဝန် ထမ်းဆောင်မှု
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခင်မောင်ဝင်း_(အသည်းရောဂါအထူးကု)&oldid=661767" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၀၆:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။